Wallpapers | MyanmarApple
သင့် device တွေ အတွက် wallpaper လှလှလေးတွေ ရှာနေပါသလား ? Wallpaper လှလှလေးတွေရှာရ ခက်ခဲနေပါသလား ? ကျွန်တောတို့ရဲ့ Wallpaper Photo Stream ထဲပါခြင်သလား ? Subscribe တစ်ခါလုပ် ထားရုံနဲ့ wallpaper အသစ်များရရှီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe လုပ်လိုသော Apple ID ကို myanmarapple[at]me[dot]com သို့ email ပို့ ၍ဖြစ်စေ iMessage ပို့၍ ဖြစ်စေ subscribe လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Automated system မဟုတ်တဲ့အတွက် Photo Stream ကို ရရှိဖို့ Apple ID ပို့ပြီး 24 နာရီခန့်ကြာနိုင်ပါတယ်။
Photo Stream ကို subscribe လုပ်ခြင်ရင် iOS6နှင့်အထက်ရှိသော iPhone, iPad, iPod touch (သို့) OS X 10.8.2 နှင့်အထက်ရှိသော Mac မှာ iCloud ကို Sign In လုပ်ပြီး Photo Sharing ကို On ထားပေးဖို့လိုပ်တယ်။
သငျ့ device တှေ အတှကျ wallpaper လှလှလေးတှေ ရှာနပေါသလား ? Wallpaper လှလှလေးတှရှောရ ခကျခဲနပေါသလား ? ကြှနျတောတို့ရဲ့ Wallpaper Photo Stream ထဲပါခွငျသလား ? Subscribe တဈခါလုပျ ထားရုံနဲ့ wallpaper အသဈမြားရရှီနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Subscribe လုပျလိုသော Apple ID ကို myanmarapple[at]me[dot]com သို့ email ပို့ ၍ဖွဈစေ iMessage ပို့၍ ဖွဈစေ subscribe လုပျနိုငျပါပွီ။
Automated system မဟုတျတဲ့အတှကျ Photo Stream ကို ရရှိဖို့ Apple ID ပို့ပွီး 24 နာရီခနျ့ကွာနိုငျပါတယျ။
Photo Stream ကို subscribe လုပျခွငျရငျ iOS6နှငျ့အထကျရှိသော iPhone, iPad, iPod touch (သို့) OS X 10.8.2 နှငျ့အထကျရှိသော Mac မှာ iCloud ကို Sign In လုပျပွီး Photo Sharing ကို On ထားပေးဖို့လိုပျတယျ။
Learn more about joining an iCloud Photo Stream
iPhone 5/5c/5s/SE အတွက် wallpaper များကို subscribe လုပ်လို လျှင် iCloud သုံးထားသော Apple ID ကို myanmarapple[at]me[dot]com သို့ email ပို့ ၍ဖြစ်စေ iMessage ပို့၍ ဖြစ်စေ subscribe လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Subject မှာဖြစ်စေ message မှာဖြစ်စေ iPhone 5/5s/5c အတွက် subscribe လုပ်လိုကြောင်းရေးပေး စေခြင်ပါသည်။
iPhone 6/6s အတွက် wallpaper များကို subscribe လုပ်လို လျှင် iCloud သုံးထားသော Apple ID ကို myanmarapple[at]me[dot]com သို့ email ပို့ ၍ဖြစ်စေ iMessage ပို့၍ ဖြစ်စေ subscribe လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Subject မှာဖြစ်စေ message မှာဖြစ်စေ iPhone6အတွက် subscribe လုပ်လိုကြောင်းရေးပေး စေခြင်ပါသည်။
iPhone6Plus/6s Plus အတွက် wallpaper များကို subscribe လုပ်လို လျှင် iCloud သုံးထားသော Apple ID ကို myanmarapple[at]me[dot]com သို့ email ပို့ ၍ဖြစ်စေ iMessage ပို့၍ ဖြစ်စေ subscribe လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Subject မှာဖြစ်စေ message မှာဖြစ်စေ iPhone6အတွက် subscribe လုပ်လိုကြောင်းရေးပေး စေခြင်ပါသည်။
Mac နဲ့ iPad အတွက် wallpaper များကို subscribe လုပ်လို လျှင် iCloud သုံးထားသော Apple ID ကို myanmarapple[at]me[dot]com သို့ email ပို့ ၍ဖြစ်စေ iMessage ပို့၍ ဖြစ်စေ subscribe လုပ်နိုင်ပါတော့မည်။ Subject မှာဖြစ်စေ message မှာဖြစ်စေ Mac or iPad အတွက် subscribe လုပ်လိုကြောင်း ရေးပေး စေခြင်ပါသည်။